माछामा आत्मनिर्भर हुँदै दाङ | आर्थिक अभियान
मंसिर १४, दाङ । दाङमा पछिल्लो समय माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । पोखरी बनाएर व्यावसायिकरूपमा माछापालनमा जोड दिइएको छ । पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि माछापालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा माछापालन फस्टाएको छ । घोराही उपहानगरपालिका–५ धर्नालाई माछापालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । किसानलाई भेटेरेनरी अस्पताल र मत्स्य विकास केन्द्रले अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । दाङका बजारमा माग बढेसँगै माछापालनतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको किसानको भनाइ छ । थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएकाले यो व्यवसायमा आकर्षण बढ्दै गएको घोराही–५ धर्नाका सरोज डिसीले बताए ।
उनले कृषि फार्म स्थापना गरी १७ पोखरीमा करीब दुई लाख माछाका भूरा पालेका छन् । वार्षिक रू. ४० लाख बराबरको आम्दानी गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्न थालेकाले व्यवसायमा लगानीसमेत बढ्दै गएको छ, उत्पादित माछा घोराही, तुलसीपुर र स्थानीयस्तरका व्यापारीले खरीद गर्ने गरेका छन् ।’ पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमिनमा पोखरी बनाई माछापालन व्यवसाय शुरु गरेको डिसीले बताए । लमही नगरपालिका–५ का टीकाराम गिरीले तीन बिघामा पोखरी बनाई माछापालन गरेको बताए । रू. २० लाखको लगानीबाट व्यवसाय शुरु गरेका गिरीको अहिले लगानी बढेर रू. ८० लाख भएको छ ।
वार्षिक रू. २५ लाख आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए । उनले उत्पादित माछा दाङका लमही, भालुवाङ, गढवाका साथै छिमेकी जिल्लामा समेत विक्री गर्छन् । ‘अरु व्यवसायभन्दा माछापालनबाट मनग्य आम्दानी भएको छ’, गिरीले भने ।
मत्स्य विकास अधिकृत यादवका अनुसार जिल्लामा माछापालनमा हालसम्म रू. सात करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ । २१७ परिवारले माछापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । जिल्लामा ५०१ पोखरी तथा ३० तालमा माछापालन गरिँदै आएको छ ।
हाल १२५ हेक्टरमा माछापालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएसँगै माछापालक व्यवसायलाई प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहयोग हुन थालेपछि जिल्लामा माछापालन व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।
अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्न थालेको छ । दाङमा अहिले वर्षेनी करीब ६०० मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । कार्प प्रजातिका माछामात्रै पालन हुने गरेको जिल्लामा अहिले पङ्गास प्रजातिका माछापालन हुन थालेसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएको यादवले बताए ।
‘पहिले–पहिले कार्प प्रजातिमा कमन, सिल्भर, रोहु, नैनीलगायत माछापालन हुन्थ्यो अहिले त पङ्गास प्रजातिका वैखालगायत माछापालन हुन थालेसँगै माछाको उत्पादन बढेको छ’, उनले भने ।
खासगरी, चैत, वैशाख, जेठ महीनामा बाहिरी जिल्लाको माछामा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा विस्तारै त्यसको निराकरण पनि हुने चरणमा छ । बाँकी समय भने यहीको उत्पादनले बजारको माग धान्ने गरेको छ । व्यावसायिकरूपमा माछापालन गर्ने कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको र राज्यले माछापालनका लागि कृषकलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने नीति बनाएकाले यसतर्फ कृषकको रुचि बढ्दै गएको छ ।
विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बेदबहादुर केसीले जिल्लामा माछाको खपत बढाउन र बाह्रै महीना उपलब्ध हुन सक्ने गरी योजनाका साथ कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालिएको जानकारी दिए । माछाको उत्पादन बढाउन र कृषकलाई मत्स्यपालनतर्फ आकर्षित गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरी निर्माणका लागि माछापालक कृषकलाई सहुलियतमा सहयोग गर्ने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । रासस